के सोशल मिडियाले डिप्रेसन ठीक गर्न सक्छ? | Martech Zone
मार्क अर्लको पुस्तक, हर्ड, मेरो लागि गाह्रो पढिएको थियो। त्यो गलत तरिका नलगाउनुहोस्। यो अद्भुत पुस्तक हो जुन मैले हग म्याक्लिओडको ब्लगबाट फेला पारेँ।
मँ भन्छु 'गाह्रो' किनकि यो १०,००० फिट दृश्य होइन। हर्ड (कसरी हाम्रो वास्तविक प्रकृतिको उपयोग गरेर सामूहिक ब्यवहार परिवर्तन गर्ने) एक जटिल पुस्तक हो जसले यसको मूल आधारको साथ आउनको लागि अध्ययन र डेटाको विस्तृतता विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछ। साथै, मार्क अर्ल्स तपाईंको औसत ब्यापार पुस्तक लेखक होइनन् - उनको पुस्तक पढ्दा मलाई यस्तो लाग्छ कि म यस्तो पुस्तक पढ्दैछु जुन मेरो लिगबाट बाहिर छ (यो वास्तवमै हो!)। यदि तपाईं बौद्धिक हुनुहुन्छ र गहिरो, गहिरो सोच र समर्थन मापदण्डको कदर गर्नुहुन्छ भने - यो तपाईंको पुस्तक हो।
यदि तपाईं यो मेरो जस्तै बनाइरहनुभएको छ भने, यो राम्रो किताब पनि हो। 🙂 मँ यहाँ लेखेर धनी सामग्री को केहि बदली गर्न सक्छ, तर हेक के हो! म यसको लागि जाँदैछु।
मार्कले छुने एउटा विषय डिप्रेसन हो। मार्कले डिप्रेसनको दुई साझा कारणहरू उल्लेख गर्दछन् - आमाबाबुको बच्चासँगको सम्बन्ध र अर्को व्यक्तिको साथ व्यक्तिको सम्बन्ध। म मद्दत गर्न सक्दिन तर आश्चर्यचकित छ कि यदि सोशल मीडिया उत्तम विकल्प छैन Prozac उदासी जस्ता सामाजिक रोगहरूको लागि। सोशल मिडियाले अरूसँग कुराकानी गर्ने वाचा गर्दछ जुन घर, अफिस वा तपाईंको छिमेकमा तपाईंको स्थानीय सर्कल बाहिर हुँदैन।
twitter, WordPress, फेसबुक, भेला गर्नुहोस्, अनलाइन खेलहरू ... यी सबै अनुप्रयोगहरू केवल 'वेब ०.०' होइन, तिनीहरू एक अर्कासँग सञ्चारको माध्यम हुन्। यसमा कुनै आश्चर्य छैन कि किन सामाजिक अनुप्रयोगहरू यति लोकप्रिय छन्। के हामी बीचको इन्टरनेट को सुरक्षा संग मानिसहरूलाई खुला गर्न को लागी धेरै सजिलो छैन?
केहि महिना अघि भएको सम्मेलनमा मलाई एउटी आइमाईले सम्झी
यी व्यक्तिहरू को हुन् र दिनको सबै घण्टा तिनीहरू कसरी अनलाइन छन्? के तिनीहरूको जीवन छैन?
यो एक चाखलाग्दो परिप्रेक्ष्य हो!, हैन? मलाई शंका छ कि धेरै व्यक्तिको लागि, यो is आफ्नो जीवन। यो अरूसँग तिनीहरूको जडान हो, तिनीहरूको शौकहरू, तिनीहरूको रुचिहरू, उनीहरूका साथीहरू र उनीहरूको समर्थन। विगतमा, 'एक्लो' वास्तवमै एक्लै बस्नुपर्थ्यो। तर आज, 'एकल' हुनु पर्दैन! ऊ / उनि अन्य शौसहरू उही शौकको साथ पाउन सक्छ!
केही तर्क गर्न सक्छन् कि यस प्रकारको 'सामाजिक' नेटवर्क र यससँगको सुरक्षा नेट वास्तविक सम्बन्ध र मानव सम्पर्कको रूपमा स्वस्थ छैनन्। तिनीहरू सहि हुन सक्छन् ... तर म पक्का छैन कि व्यक्तिहरूले यसलाई विकल्पको रूपमा व्यवहार गरिरहेका छन्। धेरै व्यक्तिको लागि, यो is उनीहरुसंग सञ्चारको एकमात्र माध्यम।
हाई स्कूल मा मेरो साथी, मार्क, एक अद्भुत कलाकार थियो। ऊ केटाको ठूलो भालु थियो। उसले १० औं कक्षामा पूर्ण दाढी राख्यो र भ्याम्पायर र भेरुभल्भ्सको कथाहरूसहित हास्य पुस्तकहरू लेख्यो। मलाई मार्कको साथ ह्या hanging्गआउट गर्न मन पर्थ्यो तर म सधैं भन्न सक्थें कि ऊ सबैको वरिपरि असहज थियो - मलाई पनि। मलाई लाग्दैन कि ऊ एकदम उदास थियो, तर ऊ एकदम शान्त थियो कहिले काहिं गर्ज (बाहेक म फर्किए)।
म इमान्दार भई मार्क प्रसिद्ध प्रख्यात इलेलेक्टिक कलाकार हो भनेर कल्पना गर्न सक्छु, वा हुन सक्छ मरुभूमिमा आज उहाँ आफैं बस्दै हुनुहुन्छ। म सहयोग गर्न सक्दिन, तर हैरान। यदि मार्कसँग आफ्नो अविश्वसनीय कथाहरू प्रकाशित गर्न ब्लग र आउटलेट थियो भने, मलाई लाग्छ कि उहि रुचिहरूसहित अन्य हजारौं मानिसहरूसँग उहाँसँग सम्पर्क राख्नु भएको थियो। ऊसँग एक सामाजिक नेटवर्क थियो - साथीहरू र प्रशंसकहरूको नेटवर्क जसले उसलाई प्रोत्साहित र प्रशंसा गर्‍यो।
म कुनै पनि हिसाबले inferring छैन कि हामी ब्लगरहरू हाम्रो लेखन को माध्यम बाट डिप्रेसन वा एकाकीपनबाट उम्किरहेका छौं। हामी गर्छौ; यद्यपि हाम्रा पाठकहरूको ठूलो आदर म फरक छैन। यदि मैले अर्को ब्ल्गरमा मेरो साथीको साथी रहेको देखेको खण्डमा म उफ्रिएर उसलाई बचाउनेछु। यदि मैले बिरामी भएको ब्लगरको बारेमा सुनेको छु भने, म साँच्चिकै उसलाई र उसको परिवारको लागि प्रार्थना गर्छु। र जब ब्लगरले ब्लगिंग रोक्दछ, म उनीहरूबाट सुन्न साँच्चिकै मिस गर्दिन।
हाम्रो हप्ता 50० देखि 60० सम्म काम गर्दै र एक एक्लो बुबा हुन, मसँग धेरै छैन “जीवन” (जसरी मैले उल्लेख गरेकी महिला द्वारा परिभाषित गरिएको) मेरो ब्लग र क्यारियरको बाहिर। विडंबना, जबकि, मेरो जीवन अनलाइन अविश्वसनीय समर्थन, खुशी र आशावान छ। म साँच्चिकै खुसी छु (गैर-औषधी तर अधिक वजन) केटा। म विश्वास गर्दिन कि म एक अर्को बदल्न कोशिस गर्दैछु। मलाई लाग्छ कि दुबै महत्वपूर्ण र पुरस्कृत छन्। वास्तवमा, म विश्वास गर्दछु कि मेरो 'अनलाइन' जीवनले मेरो 'वास्तविक' जीवनमा एक राम्रो संचारकर्मी हुन धकेलीयो। यो मेरो लेख्नको लागि चिकित्सीय हो र यसले मेरो लिखित बारेमा प्रतिक्रिया लिने बित्तिकै राम्रो महसुस गर्दछ (यो नकरात्मक पनि भए पनि)।
सत्य यो हो, यदि मसँग सहयोग नेटवर्क छैन भने जुन म तपाईंसँगै मान्छेहरूसँग छ… म सायद सकेजति दुखी होऊ र डिप्रेसन मा पर्न सक्छ। म शायद रातमा भिडियो गेमहरू खेल्दै छु र मेरा साथीहरूलाई दिनको समयमा दु: खी बनाउँदैछु।
म यसको सट्टामा मेरो वेब २.० गोलीहरू लिन्छु।
टैग: व्यवहारनिराशनिराशाबथानलाईइर्कहरू चिन्ह लगाउनुहोस्अनलाइन व्यवहारसामाजिक मिडिया व्यवहार
सुरुमा म विश्वास गर्दिन कि सामाजिक वेब २.० उपस्थिति सामानहरू जस्तै ट्विटर, ब्लगहरू र त्यस्तै कुनै पनि ठाउँमा अवसाद जस्ता चीजहरूको उपचारको नजिक छन् र म अवसादका कारणहरूको लागि मार्कको तर्कसंग सहमत छैन।
त्यसले भने पनि तथापि म विश्वास गर्दछु कि वेब मार्फत हाम्रो अन्तरसंचारले कसैको आत्मसम्मान, कल्याणको भावना र केही मामिलाहरूमा कसैको जीवनमा केही कठिन अवधिको बीच सहयोग पुर्‍याउँछ। म क्वालिफाइ गर्नेछु कि यद्यपि म ब्लगलाई ट्वीटर र त्यस्तै स्तरमा राख्दिन (म यी दिनहरूमा केहि चाँडै केही गरिरहेको छु)।
उदाहरणका लागि WinExtra को भागको रूपमा मसँग पनि IRC च्यानल छ जुन अर्ध-आमन्त्रित हो (विशेष गरी यदि मलाई थाहा छ कि मान्छेहरू पहिलो स्थानमा IRC गर्छन्) र मेरो एक करीव मित्रको अन्तिम वर्षमा उसले गम्भीर लाइभ बनाउन आवश्यक छ भनेर बुझे। एक लत आउन को लागी परिवर्तन गर्नुहोस्। उनी सफल थिए - एक व्यसनको साथ सफल पनि। - तर उनले मलाई एक दिन भने कि यदि यो आईआरसी च्यानल र त्यहाँका मानिसहरूका लागि नभएको भए उसले इमानदारीसाथ थाहा पाउँदैन कि उसले त्यो बनाएको हो कि भनेर। धेरै अँध्यारो समय।
अर्को एउटा केसमा जुन WinExtra फोरम र IRC च्यानल को लामो समयदेखि mebers एक मात्र भयो पोस्ट गर्न वा च्यानल मा देखाउन रोक्न। फलस्वरूप अमेरिकामा दुई सदस्य धेरै चिन्तित भए र उसलाई ठीक छ भनेर निश्चित गर्न गरेको कुरा ट्र्याक गर्ने प्रयास प्रक्रिया शुरू गरे। आज त्यो अचानक च्यानलमा देखा पर्‍यो र यो एक लामो हराएको साथी जस्तो घर फर्कदै आएको थियो - दुबै उहाँ र हाम्रो लागि।
यो समुदाय हो र यो सामाजिक नेटवर्कको वेब २.० को विश्वमा ओगिनेट नभएको बेला म कुनै पनि फेसबुक वा ट्विटर समुदायमा यसलाई लिन्छु। यसको साथमा मलाई यो लाग्छ कि यसले एक अनलाइन समुदायको दीर्घायु र मित्रको गहिराइ छ भने (जुन तपाईं बुझ्नुहुन्छ कि हाम्रो फोरम जति सानो हुन तिनीहरू करीव छ प्लस वर्ष को लागी भएको हुन सक्छ) यसले व्यक्तिको जीवनको एक हिस्सालाई राम्रो बनाउँदछ र तपाईंलाई सम्बन्धको भावना दिन्छ - जुन वास्तवमा हामी सबै मानिस हाम्रो जीवनबाट चाहन्छौं।
अगस्ट 22, 2007 मा 9: 37 AM
मैले चेतावनी दिएँ कि मैले मार्कका शब्दहरूलाई विकृत बनाएको छु ... मैले गरेको जस्तो देखिन्छ! मार्कले डिप्रेसनको बारेमा केहि लेखलाई सन्दर्भ गर्दछ र दर्शाउँदैन कि यी निश्चित रूपमा निराशका एकमात्र स्रोत हुन् - यी केवल दुई जोडीहरू थिए जसलाई उल्लेख गरिएको थियो। सामाजिक मिडिया को सिद्धान्त र यो अवसाद मद्दत गर्ने अवसर मार्क को होइन, यो एक हो कि म बारेमा सोच्न।
तपाईंको समुदायको बारेमा अद्भुत कथा र म तपाईंसँग सहमत छु - अन्ततः सम्बन्धित जुन सबैलाई स्वस्थ हुन आवश्यक छ। मलाई लाग्छ कि सोशल मिडियाले हामीलाई समुदायहरूमा 'सम्बद्ध' गर्न खुला छोड्दछ जुन हामी कहिल्यै अन्यथा देखा पर्दैन थियो।
असाधारण टिप्पणीको लागि धन्यवाद!
अगस्ट,, २०१ 22 2007:२१ अपराह्न
उत्कृष्ट पोष्ट, डग! मैले सामाजिक नेटवर्कि aलाई धेरै व्यक्तिहरूको मुड र जीवनका साथ सम्पर्कमा रहनको लागि फेला पारेको छु जुन म साथी हुँ भनेर विश्वास गर्दछु, तिनीहरू मध्ये कोही करीव साथीहरू पनि छन् र अन्य जीवनमा पनि प्रभाव पार्दछ जुन मसँग दिनको लागि पर्याप्त घण्टा हुँदैन। । यदि म खाँचोमा परेको साथीलाई देख्छु, मँ चाँडो सम्पर्कमा जानको लागि समर्थनको लागि म के गर्न सक्दछु। मैले साथीहरू पनि प्राप्त गरें (तपाई आफैं सामेल!) इलेक्ट्रोनिक संचारको माध्यमबाट कि म अन्यथा राम्रोसँग चिन्न सक्दिन, जुन फलस्वरूप अफलाईन मित्रतामा पनि परिणत भएको छ।
PS मैले तपाईंको दैनिक लेखहरू छुटाएँ जब तपाईं आफ्नो प्रोजेक्ट र संक्रमणमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। तपाईको पोष्टहरू भर्खरै देख्न पाउँदा म खुसी छु!
धन्यवाद जुली! म राम्रो गतिमा फर्कने प्रयास गर्दै छु तर म संघर्ष गर्दै छु। म लामो घण्टा काम गर्दछु र म व्यायाम जोडें (कल्पना गर्नुहोस्!) मिक्समा। मैले अझै सही सूत्र पत्ता लगाएको छैन - मँ धेरै पागल र थाकेको छु।
म त्यहाँ पुग्छु!
म सिद्धान्तसँग पूर्ण रूपमा सहमत छु कि सोशल मिडिया साइटहरू प्रयोग गर्नु राम्रो उपचारात्मक चीज हो। मेरो लागी, मैले यो महसुस गरेको छु कि यो मेरो भावनाहरुका बारे लेख्न धेरै नै राम्रो र स्वतन्त्र छ। पनी कसैले तिनीहरूलाई पढेन भने पनि। वास्तवमा यसलाई लेख्न शक्ति छ। मलाई फेसबुक र माइस्पेस जस्ता साइटहरू पनि मन पर्छ। तिनीहरूले व्यक्तिहरूलाई उनीहरूसँग बढी जडान हुन अनुमति दिन्छ यदि उनीहरूसँग त्यो जडान थिएन भने। सामाजिक मिडिया साइटहरु को बारे मा यो जानकारी पोष्ट गर्नु भएकोमा धन्यवाद। म आशा गर्दछु कि अधिक र अधिक व्यक्तिहरुले यसमा राम्रो पाउँनेछन्।
हामी निश्चित रूपमा सामाजिक जनावरहरू हौं, के हामी जेसन छैनौं? यदि हामीसँग सामाजिकरणको लागि कुनै साधन छैन भने, म विश्वस्त छु कि त्यसले धेरै सामाजिक विकारहरू निम्त्याउन सक्छ र अन्य मुद्दाहरूमा क्यासकेड गर्न सक्छ।
तपाईं जस्तै, म वास्तव मा एक महान दबाव रिलिज भल्भ को रूप मा लेखन को लागी। साथै, जब कसैले मलाई धन्यवाद दिन्छ वा मैले के लेखेको बारेमा पोस्ट गर्दछ - त्यसले ओलको आत्मसम्मानको लागि आश्चर्यकर्म गर्दछ!
मलाई लाग्छ कि उदासिनता बाट पीडा वास्तवमा सामाजिक मिडिया गतिविधिहरु मा संलग्न को एक परिणाम को रूप मा कम गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि दोस्रो जीवनमा भाग लिने व्यक्तिहरूको केस स्टडीलाई हेर्नुहोस्। तिनीहरू अवतारहरू सिर्जना गर्न सक्छन् शारीरिक विशेषताहरूमा उनीहरूले चाहेको आधारमा बनाउन सक्छन् र व्यक्तिहरूसँग स्तरमा सम्पर्क राख्दछन् जुन उनीहरूले पहिले कहिल्यै नसकेका हुन सक्छन्। त्यो केवल एक उदाहरण हो।
म व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक मिडिया कसरी मद्दत गर्न सक्छ भनेर साक्षी भएको थियो। म उदासिनता, चिन्ता, द्विध्रुवी, ओसीडी, आदि बाट पीडित व्यक्तिहरू समर्थनका लागि यी समुदायहरूमा कसरी निर्भर छन् भनेर विश्लेषण गर्न म माइस्पेस डिप्रेशन समूह छलफलको अनुगमन गर्दै थिए। कुराकानी खुला हुँदा म एक व्यक्ति आफूलाई हानि गरीरहेको रूपमा हेरेको थियो। समुदाय तुरुन्तै उफ्रियो र उसलाई बाहिर मद्दत गर्‍यो। यस्तो देखिन्थ्यो कि माइस्पेस समुदायले उनको जीवन रेखाको रूपमा काम गर्‍यो।
मलाई लाग्छ जहाँ सोशल मिडिया जाँदै छ हामी अधिक सेवाहरू विशिष्ट को लागी समर्पित देख्नुहुनेछ। बिरामीहरू मलाई मन पराउँछन् (मेरो एक विगतका ग्राहक जसको लागि म अनुसन्धान गर्दै थिएँ) विभिन्न प्रकारका उदासिनताबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई एकै साथ ल्याइरहेको छ ताकि उनीहरू आफ्ना अनुभवहरू साझेदारी गर्न सक्नेछन् र एक अर्कासँग सम्पर्कमा रहनेछन्। यो एक अचम्मको उपकरण हो र तपाईंलाई देखाउन जान्छ कि सामाजिक नेटवर्कहरू एक व्यक्तिको खुट्टा जमिनमा राख्नमा कती शक्तिशाली छ। राम्रो कुरा PLM जस्तो सामाजिक नेटवर्क हो केवल एक अवस्था बाट पीडित व्यक्तिहरु को समूह मा सामिल हुन। यसले धेरै नै सहभागिताको स्तर बढाउँछ किनकि उनीहरू जान्दछन् कि तिनीहरू एक्लो छैनन्।
यो महान पोस्ट डग को लागी धन्यवाद!
स्कट - दयालु शब्दहरू र असाधारण टिप्पणीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो टेक्नोलोजी राम्रो साइटको माध्यमबाट प्रयोगमा राम्रोसँग राखिएको हेर्नको लागि यो अद्भुत छ बिरामीहरू मलाई मन पराउँछन्। महान लिंक जुन म भोली मेरो दैनिक लिंकमा राख्दै छु!
अगस्ट,, २०१ 8 2008:२१ अपराह्न
मलाई लाग्छ कि सोशल मिडियाले मानिसहरूलाई डिप्रेसनसँग सामना गर्न मद्दत गर्दछ, किन हैन?
मेरो दर्शन यो हो कि हामी सबै, र पृथ्वीमा सबै कुरा जोडिएको छ। हामी सबै उर्जाको एकल स्रोतबाट उत्पन्न भएका थियौं, र डिप्रेसन यस स्रोतबाट अलग भएको भावनाको परिणाम हो।
हो मलाई थाहा छ यो सबै एकदम नयाँ लाग्यो। तर यो एक सरल अवधारणा हो, र यसले मलाई अर्थ दिन्छ।
मलाई लाग्दैन कि सोशल मिडिया एक उपचार हो, तर यसले मानिसहरूलाई एक साथ ल्याउँदछ, र यो हामी सबै हाम्रो मूल अस्तित्वमा तृष्णा गर्दछौं।
मेरी सौतेनी छोरीले उनको अधिकांश अनलाइन समय नेक्सोपिया भनिने साइटमा बिताउँछिन्। उनले आफ्ना धेरै साथीहरू, स्थानीय रूपमा र यस सोशल नेटवर्कि site साइटमा अन्य ठाउँहरूबाट भेटेकी छिन्। सामाजिक साइटहरूले हामीलाई समान रुचिहरू भएका व्यक्तिहरू भेट्न मद्दत गर्दछ, र हामीलाई वर्तमान र पुराना साथीहरूसँग सम्पर्कमा रहनको लागि एक उपकरण हो।
म Eckhart Tolle द्वारा "अबको शक्ति" पढिरहेको छु। यस पुस्तकमा हामी किन डिप्रेशन, चिन्ता र अधिक महसुस गर्छौं भनेर विस्तारमा जान्छ।
ऊ उपचारको रूपमा "अहिले बाँचिरहेका" समाधान प्रदान गर्दछ। म सहमत छु, र खुशीको लागि एक philisophical गाइड मा रुचि सबैको लागि यो पुस्तक फिर्ता।